EZONA BHANYABHANYA ZILUNGILEYO KWIVIDIYO YENKULUMBUSO YEAMAZON UKUBA UBUKELE NGOKU (NGEYESILIMELA 2021) -RADIO TIMES - YINTONI-UKUBUKELA
Iifilimu ezilungileyo kakhulu kwiAmazon Prime Video ukuba ubukele ngoku
Ividiyo enkulu yeAmazon ipakishwe ngokuqinisekileyo kwiibhrimu ezineenkwenkwezi kunye neemovie ezikalwe kakhulu, kodwa kunokuba nzima ukwazi ukuba kufanelekile ukubukela.
Unokufumana malunga naluphi na uhlobo lwefilimu kwiAmazon Prime Video, ukusuka kwiiklasikhi zakudala ezinje ngokuDanisa okungcolileyo kunye nokuBuyela kwixa elizayo, ukukhutshwa okutsha njengoku Isidudu kunye nesandi sensimbi.
Ngapha koko, iAmazon Prime Video ineemvelaphi ezizodwa, ezinje Iipalm Springs ezingagcwalanga kuphela kumphezulu wamanzi apholileyo, kodwa zenzele ukonwabisa ukubukela nawe!
Yonke ifilimu kuluhlu olungezantsi ikhethwe ngesandla RadioTimes.com Iqela leengcali zemiboniso bhanyabhanya, ke uya kwazi kakuhle ukuba zeziphi iimuvi omele ungene kuzo xa uvula iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon. Unokusithumela umyalezo ngeTwitter @RadioTimes ukuba ufuna ukucebisa eyakho intandokazi yoluhlu.
Amaphepha ethu eVidiyo eNkulumbuso yeAmazon (kubandakanya neyona miboniso yeAmazon ibalaseleyo) aya kuhlaziywa veki nganye, ke gcina eli phepha liphawulwe njengoko siza kuba neengcebiso ezintsha ongafuniyo ukuphoswa kuzo.
Kulabo bafuna into eyahlukileyo, sikwenze uludwe lwezona bhanyabhanya zibalaseleyo zeNetflix kunye noluhlu lweNetflix, kunye nesikhokelo sakho kwiDisney +.
Igqityelwe ukuvuselelwa nge-28 kaMeyi 2021.
Ngokusekwe kubomi bokwenene bobandlululo amabanjwa ezopolitiko oMzantsi Afrika u-Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) no-Stephen Lee (Daniel Webber), le thriller, ikhokelwa ngu-Francis Annan, ubalisa ibali lamadoda amabini abalekayo entolongweni emva kokuba bevalelwe ukuhambisa i-Afrika Izinto ze-National Congress ngeebhombu zephepha. Kwifilimu, uJenkin noLee bangababhali kunye nabaphembeleli bamalungelo oluntu abajolise ekubetheni ngenkohlakalo oonogada basejele. UJenkin noLee baxoxa ngokubaleka kunye noLeonard Fontaine (UMark Leonard Winter, odlala ingxelo yomlingiswa). Njengokuba behamba ngemisebenzi yabo yemihla ngemihla baphonononga isakhiwo kwaye benza izitshixo zomthi kwizinto ezibiweyo kwiworkshop ukubakhupha kwizisele zabo nakwamanye amagumbi. Emva kokuphantse babanjwa ngexesha lokubaleka kuvavanyo lokubaleka, oonogada bakhangela iiseli zabo kodwa abafumani nto. UJenkin, u-Lee no-Fontaine bazama ukufumana amanye amabanjwa ukuba azibandakanye nabo kodwa basilele, kodwa babaleka ngempumelelo entolongweni bashiya iPitoli ngeteksi. Ekugqibeleni bafikelela eLondon ngeMozambiki neTanzania. Ukubalekela ePitoli akwenzi bulungisa kwibali eliyinyani elipheleleyo kodwa yinto evuselelayo yokuqhekeka kwejele. -U-Owen Tonks
Bukela ukubaleka ePitoli kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UGerard Butler iinkwenkwezi eGreenland (2020)
Ekhokelwa nguRic Roman Waugh, le bhanyabhanya yaseMelika ibhalwe nguChris Sparling kwaye ilandela usapho olulwela ukusinda ngaphambi kokuba impembelelo ye-comet emhlabeni. Injineli eyakhiweyo uJohn Garrity (Gerard Butler) uhlala eAtlanta, Georgia kunye nenkosikazi yakhe uAllison (Morena Baccarin) kunye nonyana wabo uNathan (Roger Dale Floyd). Nge-comstellar comet Clarke edlula emhlabeni, uJohn kunye nosapho lwakhe bakhethwa kwindawo yokuhlala engxamisekileyo njengoko ejonge iqhekeza elivela kwilitye lesithuba lingena kumhlaba womhlaba uhlala kumabonwakude obetha iTampa, eFlorida, etshabalalisa isixeko. Inani lamaqela alichaphazelayo iplanethi kwezi ntsuku zimbalwa zizezona zinkulu kulindeleke ukuba zibangele inqanaba lokucima. Usapho luphose inqwelo moya yokubaleka njengoko unyana wabo engakwazi kuhamba ngenxa yeswekile. Bahamba baya e-Ontario, Canada emva kokufunda iinqwelomoya beshiya iGreenland apho kukho uthotho lwee-bunkers eziphantsi komhlaba. Uhambo lwabo luyakhathazeka njengoko bephathwa ngabantu abanobutshaba ababona ibhanti yesihlwitha kaJohn kwaye bachaphazeleka ngamaqhekeza e-comet e-Upstate New York. Ekugqibeleni bafikelela kwinqwelomoya kwaye bacenge umqhubi wenqwelomoya ukuba abathathe kodwa bayawa emhlabeni kunxweme lwaseGreenland ngenxa yesiqhekeza esinye. Emva kokuhlala i-bunker kwiinyanga ezilithoba bahamba baya kutshintshwa ngokugqibeleleyo kodwa bacoca imeko-bume, ebenza bakwazi ukwakha ubomi babantu. Ifilimu yamkelwe kakuhle ngabagxeki abayincoma ngokuba yimiboniso bhanyabhanya enqabileyo evakalelwa ngokungathi iyinyani. -U-Owen Tonks
Bukela iGreenland kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Iqondiswe kwaye yabhalwa ngokudibeneyo nguDimitri Logothetis, lo mboniso bhanyabhanya waseMelika wase-sci-fi usekwe kwincwadi yamahlaya ka-2017 enegama elifanayo nguLogothetis noJim McGrath. Umboniso bhanyabhanya ubona iodolo yamandulo yabalwi beJuu Jitsu ekulweni nabahlaseli abanobukrwada abavela kwitempile yaseBurma (eMyanmar) rhoqo emva kweminyaka emithandathu. Abalweli bakhusele uMhlaba ngempumelelo ukuza kuthi ga ngoku. I-Kickboxer Alain Moussi idlala uJake Barnes ophulukene nenkumbulo yakhe emva kokuwa eweni kwaye ebetha entloko kwindawo yokulwa. Njengokuba eqala ukubuyela ezingqondweni uzama kwakhona ukufumana injongo yakhe yokulwa kunye noncedo lwabaphumi-mkhosi bokulwa u-Wylie (Nicholas Cage), uCarmen (JuJu Chan), Kueng (Tony Jaa) no Forbes (Marrese Crump). Ubuzwa imibuzo kwiziko lomkhosi apho afakwe khona ngenyaniso yeserum kodwa wafumana umhlobo eKeung owambulela ngokubamba isandla okhethekileyo. Bashiya isiseko kwaye badibana nabanye abalwa kwaye, emva kokubaleka amajoni, bayakwazi ukohlula ugqatso lwasemzini, badlala kwiindawo ezininzi zokulwa. Ngelixa uNicholas Cage angatsala abaphulaphuli, ifilimu ayiphefumlelwanga ngokulandelelana kwamanyathelo, kwaye uchazwe njengongonwabanga kwaye onomsindo ngabagxeki. -U-Owen Tonks
Bukela uJuu Jitsu kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Le drama yaseMelika, ebhaliweyo kwaye ilawulwa nguLee Isaac Chung, ibali eliyi-semi-autobiographical based on the Chung's grow. Eli yelenqe lilandela usapho lwabaphambukeli baseMzantsi Korea abazama ukwenza ubomi emaphandleni aseMelika ngoo-1980. Ifilimu ifumene amabhaso ahlukeneyo, kunye ne-premiere yayo yehlabathi ebibanjelwe kwiSundance Film Festival ngoJanuwari 2020 apho yaphumelela khona iigong ezimbini. Ifumene amagama atyunjiweyo amathandathu kwiminyaka engama-93rdAmabhaso ama-Akhademi ngo-Youn Yuh-jung, odlala i-Soon-ja, efumana ukwamkelwa kwilizwe liphela njengomlingisi wokuqala waseKorea ukuphumelela u-Oscar obambeleyo ngeBhaso loMdlali weNkxaso oBalaseleyo ngokusebenza kwakhe. Ikwa phumelele iGlobal Globe kwaye yafumana amagama abathandathu e-BAFA. U-Youn udlala umakhulu ka-David Yi (Alan Kim) ovela eKorea ukuza kuhlala nosapho kwifama yabo yase-Arkansas emva kokuba besukile eCalifornia benethemba lokukhula kwaye bathengise imveliso yaseKorea kubathengisi baseDallas, beza nembewu yakhe encinci (isiKorea seelery yamanzi) imbewu . Kungekudala-ja iingqondo zabantwana kwaye zihlengahlengisa kubomi baseMelika. Ukhuthaza ukuzimela kukaDavid nanjengoko yena nosapho lwakhe bembambe emqolo ngenxa yesimo sentliziyo yakhe kodwa uPhambili-ja unesifo esibuhlungu esishiya intshukumo nokuthetha kwakhe kuphazamisekile. Ishishini losapho lijongene nobunzima kwaye kungekudala-ja ngengozi ibeka ingqolowa ngomlilo ngelixa abanye bengekho e-Oklahoma City. UDavid ufumana amandla okukhusela umakhulu wakhe njengoko imeko yakhe isiba ngcono kwaye nesivuno seminari sivelisa isivuno esihle. IMinari ngumlindo ovuyisayo onomtsalane kwindalo iphela. -U-Owen Tonks
Bukela iMinari kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ubuhlungu bukaTom Hardy (Sony, HF)
Iveliswe yiColumbia Pictures ngokubambisana neMarvel kunye neTencent Pictures, le American Spider-Man spin-off ikhokelwa nguRuben Fleischer. Intatheli u-Eddie Brock / uVenom (uTom Hardy) ufumana amagunya amakhulu kwizityalo zasemzini neziceba ukuhlasela uMhlaba. Aba baphambukeli bafunyaniswe ngumbutho wobunjineli we-bio-engineering we-Life Foundation abafuna indawo yokuhlala abantu, kwaye bafumanisa ukuba izidalwa zifuna imikhosi yokuphefumla ioksijini ukuze iphile. Abaphambukeli bahlala benqaba iinginginya, zibangele ukuba bafe, kwaye u-Brock ufumanisa i-Life Foundation bayoyisa iziphumo zolu hlobo ebantwini ezivela kuxwebhu olukuye ntombi yakhe yegqwetha. Uncediswa kwilebhu apho abaphambukeli benziwe kukungonwabi ngumqeshwa weSiseko soBomi kwaye uzama ukukhulula izifundo zovavanyo. Ngokukhawuleza ubonakalisa iimpawu ezingaqhelekanga kunye nokubonakaliswa komzimba wakhe, ezazisa njenge Ubuhlungu . U-Brock ufunda umfokazi ukubola kwamalungu akhe angaphakathi kodwa ufunda ubuthathaka bawo. Esi sibini sisebenza kunye ukukhusela abanye abantu basemzini abazimisele ukutshabalalisa abantu. Emva kokukhululwa kwayo ngo-2018, iVenom yahluthwa ngabagxeki kwiskripthi sayo kunye nethoni, kunye nokusilela konxibelelwano noSpider-Man kodwa uHardy wanconywa ngokusebenza kwakhe. Nangona kunjalo, ifilimu yayiyibhokisi yeofisi ebetha imali engange- $ 856million (£ 617m) kwihlabathi liphela. -U-Owen Tonks Bukela iVenom kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ifilimu ebhaliweyo yaseMelika eyalelwa yaze yaveliswa nguBryan Fogel, I-Dissident ilandelela ukunyamalala nokubulawa kwentatheli yeWashington Post uJamal Khashoggi emva kokungena kwi-Consulate yase-Saudi Arabia e-Istanbul. Ikwajonga kwakhona ibhidi yaseSaudi yokulawula ukungavisisani kwilizwe jikelele. Ifilimu eyaqala ukubakho kwiSundance Film Festival ngoJanuwari ka-2020 kunye ne-Saudia Arabian activist kunye ne-vlogger u-Omar Abdulaziz embindini wexwebhu. Umlingane kaKhashoggi kunye nabaphikisi kwihlabathi liphela bajonge imikhondo yokubulala kunye nokufihla, kunye neziphumo zayo. Ingxelo ye-CIA epapashwe ngabaphathi be-Biden ibonisa ukuba inkosana yase-Saudi Arabia u-Mohammed bin Salman wayebandakanyekile ekufeni kuka Khashoggi kodwa uFogel unyanzelisa ukuba angaze ajongane ne-Interpol okanye uphando olusesikweni ngenxa yobutyebi bakhe. Ifilimu yamkelwe kakuhle ngabagxeki abathi, ngelixa bevuma ukuba akukho lwazi lutsha luchaziweyo, bayincoma ngokujonga ngokubanzi ibali. -U-Owen Tonks Bukela ukungazithembi kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ekhokelwa nguMichael Noer, le drama ka-2017 ibalisa ibali lomgwebi waseFrance uHenri Charriere (uCharlie Hunman) obizwa ngegama lesiFrentshi elithi butterfly, papillon. UCharriere wavalelwa kwintolongo edume kakubi yaseDevil’s Island eFrench Guiana emva kokuba wayenzelwe ukubulala, ebaleka ngo-1941 encediswa lelinye ibanjwa uLouis Dega (Rami Malek). Ngaphezulu kwamabanjwa angama-80,000 aye agcinwa eDiirion Island ngokuhamba kwexesha kungekho namnye owakhe wakhululeka kwaye uninzi aluzange lubuyele eFrance, kodwa uCharriere ukwazile ukuphepha ngesikhephe ukuze aphoswe eluvalelweni lodwa emva kokufunyanwa. Ukuvela kwedwa ixhego lizama ukubaleka kwakhona ngempumelelo. Ifilimu isekwe kwi-autobiographies kaCharriere uPapillon kunye neBanco, kunye ne-1973 yesilivere yokulungelelaniswa kwegama elifanayo elibonisa uSteve McQueen noDustin Hoffman. Ukukhutshwa kukaPapillon ngo-2017 kwenziwa kakuhle kwaye kwaveliswa, kubeka umjikelo kwinto esele ixeliwe. -U-Owen Tonks Bukela iPapillon kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
I-Justice League cast kubandakanya uHenry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman) noJason Momoa (Aquaman)
I-Justice League Yifilimu esekwe kwiqela le-DC Comics superhero yegama elifanayo. Eli yelenqe libona uBruce Wayne / Batman (Ben Affleck) ecela uncedo luka-ally Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot) ukuba ajongane notshaba lwabo emva kokuba ephefumlelwe nguClark Kent / Superman (uHenry Cavill). UBatman kunye noMfazi oMangalisayo ngokukhawuleza bakha iqela elinomtsalane leemeta-zabantu ukuba bame ngokuchasene nesoyikiso esitsha emva kokuba igosa lomkhosi elingendawo elibi uStepenwolf (uCiaran Hinds) ebuyile eMhlabeni emva kokubhubha kukaSuperman. U-Queen Hippolyta (uConnie Nielsen) ulumkisa intombi yakhe uDiana Price malunga nesoyikiso esidalwe yiplanethi kwaye udibana neBatman kunye neWonder Woman ukuxoxa ngendlela yokusindisa ubuntu. Nangona kunjalo, nangoncedo luka-Arthur Curry / Aquaman (Jason Momoa), uVictor Stone / uCyborg (uRay Fisher) kunye noBarry Allen / The Flash (Ezra Miller) abanokuba namandla ngokwaneleyo. Umboniso bhanyabhanya oboniswe kumdlalo odumileyo waseDolby Theatre eHollywood nge-13 kaNovemba ka-2017 kunye ne-429 yezigidi zeedola ($ 308m) kwihlabathi liphela. Ityunjelwe iindidi zamabhaso aquka amabhaso amabini eGolden Trailer, amabhaso okuKhetha abantwana kunye neTeam Choice Award. Ifilimu yafumana uphononongo oluxubekileyo kwaye, ngelixa yayinconywa ngokulandelelana kwayo kunye nokwenza, yagxekwa ngomdlalo wayo weqonga, i-CHI kunye necebo elibhityileyo. -U-Owen Tonks Bukela i-Justice League kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UMitch Rapp (Dylan O'Brien) ucebisa elunxwemeni kwintombi yakhe uKatrina Harper (uCharlotte Vega) ngelixa bekwiholide e-Ibiza kodwa umzuzu wesithandane ubethwa uphuma emanzini njengoko iseli ye-jihadist ihlasela abahlali ngoombayimbayi. U-Rapp ngokuzama uzama ukufumana uHarper njengoko beqhekekile kwisiphithiphithi kodwa efumanisa ukuba ubulewe. U-Rapp othukileyo ugqitywe ngumsindo kunye nesidingo sokuziphindezela kwaye uhlala engena kwiibhodi zemiyalezo ye-intanethi apho abuza khona abagrogrisi abanoxanduva lokufa kwentombi yakhe malunga nenkolo yakhe yamaSilamsi. URapp wenza ukuba umgrogrisi avume ukudibana naye eLibya apho kwaye alungiselela impindezelo yakhe. Ngaphambi kokuba abulale ubugrogrisi, iseli ligqatswe yimikhosi ekhethekileyo yase-US eshiya iRapp ngakumbi izele ngumsindo. Ifilimu, ekhokelwa nguMichael Cuesta, khange yamkelwe kakuhle, ngeflick ibanjiwe ngokungabonakali kwezinye iiprojekthi ezifanayo. U-O'Brien uswele umbane kwintsebenzo yakhe kodwa ifilimu inokonwabisa abo bangaqhelananga ne-spy-thrillers. -U-Owen Tonks Bukela i-American Assassin kwi-Amazon Prime Video
Imbaleki yeMaze: Unyango lokuFa
UDylan O'Brien kunye noKaya Scodelario kwiMaze Runner
Ifilimu yase-American dystopian sci-fi ka-2018 ekhokelwa ngu-Wes Ball isekwe kwinoveli ka-2011 yonyango lokufa nguJames Dashner. Yinto elandelayo eya kwi-Maze Runner ka-2015: I-Scorch Times kunye nesitofu sokugqibela kuthotho lwesithathu. UThomas (Dylan O'Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster) noFrypan (Dexter Darden) ngabokugqibela kumajoni akhululekileyo eGladers kwiintsholongwane zeFlare ezihlasele abantu behlabathi. Bekunye ne-Right Arm ukumelana baqala ukwenza umsebenzi wokusindisa abanye abantu bakuloliwe abasebenza yi-WCKD, umbutho othe wabamba wenza amalinge kubantwana bomzimba. Eli qela lizenza ngathi ngamajoni e-WCKD ukuze angene kwikomkhulu lombutho apho afumana khona i-serum ecothisa intsholongwane. Ifilimu ibona inani lezenzo eziphezulu njengoko bejongana nengxaki ezandleni zabavukeli abaziwa ngokuba zii Cranks. Ifilimu sisiphelo esifanelekileyo kwabo babukele izavenge zangaphambili kwi-franchise kodwa ayinakulindeleka kubabukeli abatsha. -U-Owen Tonks Bukela iMbaleki yeMaze: Unyango lokufa kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
Iholo yeArsenio kunye noEddie Murphy
Iimpawu eziphambili ze-Intl
Ukuza kwe-2 eMelika ngumdlalo ohlekisayo wefilimu ye-1988 Ukuza eMelika eneenkwenkwezi uEddie Murphy. Ekhokelwa nguCraig Brewer, oku kulandelwa kukubona iPrince Akeem (Murphy) ibizwe phambi kukayise oswelekileyo uKumkani uJaffe Joffer (uJames Earl Jones) omxelela ukuba u-Akeem unonyana olahlekileyo emva kokudibana ebusuku nabafazi ababini kwisiXeko saseNew York engamnikanga iziyobisi, emenza alibale i-tryst ngela xesha wayesakhangela ukumkanikazi. U-Akeem ubuyela esixekweni eyokukhangela umntwana wakhe njengoko isithethe saseZamundian sisithi kuphela indoda eyindlalifa enokuthatha itrone. Ukuba akafumaneki, uZamunda unokujamelana nokuthathwa ngobundlobongela ngummelwane wezomkhosi uNexdoria. Uzwilakhe waseNexdoria, uGeneral Izzi (uWesley Snipes), ufuna intombi endala ka-Akeem uMeeka (Kiki Layne) atshate nonyana wakhe u-Idi (Rotimi). U-Akeem ufumana unyana wakhe, uLavelle Junson (uJermaine Fowler), kwaye bamthatha kunye nonina uMary (Leslie Jones) babuyela eZamunda. Unyana ka-Akeem ufunda ngengxaki kaZamunda kwaye uyavuma ukuthatha inxaxheba kuthotho lwezilingo zesintu kodwa ezinobungozi kunye novavanyo ukuze abe yinkosana yelizwe. Ufumana inkosazana egama linguBopoto (Teyana Taylor) kodwa, ekubuyeni kwakhe eMelika, inkosana yanikezela kuthando lwayo lwenene uMirembe (uNomzamo Mbatha), umkhaphi wasebukhosini awayedibanise naye ukusukela ekufikeni kwakhe eZamunda. Ukuza kwe-2 eMelika kwafumana uphononongo oluxubekileyo, kunye nolunye uphawu lokudinwa kunye ne-re-hash yefilimu yokuqala. -U-Owen Tonks Bukela ukuza kweMelika ezimbini kwiAmazon Prime Video
Ifilimu yaseMelika yesayensi ekhokelwa nguJohn Suits ibona uMhlaba usokola kwisigameko sokuphela emva kwesibetho esitshabalalisayo kunye nabantu abangama-300 000 abasindileyo abakhethwe ukuba bahambe ngenqanawa yesiphekepheke ukuya eMhlabeni mtsha. UNowa (uCody Kearlsey) ujoyine i-mission ngokuzenza umgcini junior njengentombi yakhe ekhulelweyo uHayley (Kassandra Clementi) ebaleka njengomkhweli. Umntu okhulileyo ongumgcini ongumntu okruqulayo (uBruce Willis) uzithathela kuye ukuba aqeqeshe uNowa. I-bond crew kodwa izehlo kwi-interstellar ship zithatha ujikelo olungaqhelekanga njengoko zifumana amalungu efile ngelixa abanye behlaselwa. Abagxeki babekwa ityala ngenxa yeemeko ezingachazwanga kwaye bayabanjwa kodwa bafumanisa ukuba amandla angaziwayo anenjongo yokutshabalalisa okuseleyo eluntwini ngaphambi kokuba bafike kwikhaya labo elitsha. Umboniso bhanyabhanya yindawo ephantsi eyoyikisayo eneenkwenkwezi ngamagama amakhulu aya kuba mnandi kubalandeli bolu hlobo lungezantsi. - I-Owen Tonks Bukela ulwaphulo kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Inokuba ibingunyaka ngaphandle kokuboniswa kwe-blockbuster enkulu kunye ne-red carpet premieres, kodwa oko akukhange kumise iifilimu ze-Golden Globe-win, ezinje nge-Kevin Macdonald's I-Mauritanian, ekufikeleleni kwabo bebeza kuba zii-cinema-goers ekhaya. Ngokusekwe kwibali eliyinyani lika-Mohamedou Ould Slahi, le midlalo yeqonga esemthethweni INyoka kaTahar Rahim njengoSlahi, injineli yaseMauritania eyagcinwa ngaphandle kokumangalelwa okanye ukuxoxwa kwetyala ngurhulumente wase-US eGuantanamo Bay kangangeminyaka eli-14, ngelo xesha wayephethwe kakubi iindlela zokuhlukumeza.
Ebonisa intsebenzo eyaphukileyo nethabathekisayo evela eRahim, iMauritania ilandela uSlahi njengoko ekugqibeleni encediswa ngamagqwetha e-pro-bono uNancy Hollander (Jodie Foster) noTeri Duncan (uShailene Woodley) abalwela iminyaka ukuze bamfumane ityala elifanele yena ngelixa ejongene ngamaxwebhu aseburhulumenteni, urhulumente ongasebenzisaniyo kunye nomtshutshisi onomdla kwezomkhosi odlalwa nguBenedict Cumberbatch. Umlindo okhanyisayo, uMauritania uxelela ibali likaSlahi elimangalisayo nelibuhlungu, ekhanyisa inkohlakalo yeendlela zokuphucula imibuzo ze-CIA emva kwe-9/11 ngokujika okumanyumnyezi kwiFoster ephumelele amabhaso. -U-Lauren Morris Bukela iMauritanian kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon .
I-Courier isekwe kwibali eliyinyani malunga neenjineli zaseBritane kunye nosomashishini uGreville Wynne (uBenedict Cumberbatch) owaye wafunyanwa kwi-MI6 ngenxa yokuhamba kwakhe rhoqo ukuya eMpuma Yurophu. Waye wacelwa yimpimpi ye-MI6 kunye ne-CIA kwaye wacelwa ukuba azenze njengeqabane leshishini le-arhente yeSoviet u-Oleg Penkovsky (Merab Ninidze). UWynne waziwa ngomsebenzi wakhe njengomthumeli ohambisa ulwazi oluyimfihlo oluya eLondon ukusuka ePenkovsky. Esi sibini sinike ubungqina obugqibe iCrisis Missile Crisis. Bobabini uWynne noPenkovsky bayabanjwa, nto leyo ibangele ukuba uPenkovsky avume ukungcatsha iRussia ngelixa enyanzelisa uWynne ukuba angazi nto. UPenkovsky uyabulawa kwaye uWynne ekugqibeleni ukhululwe kutshintshiselwano lwamabanjwa ku-Konon Molody wase-Russia. Ifilimu yamkelwe kakuhle kwaye yanconywa ngesimbo sayo sedrama yesikolo esidala. ICumberbatch ibeka intsebenzo elungileyo njengoyena mntu uphakathi kwaye ifilimu yenza enye indlela efanelekileyo yokufumana usasazo olululo kunye neendaba ezifanayo. -U-Owen Tonks Bukela iKhuriya kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UJim Carrey weenkwenkwezi kwiTruman Show (1998)
Umlingisi ohlekisayo uJim Carrey wazibonakalisa njengomdlali onesiphiwo somdlalo oprofetha, owaqala ukubetha iimovie ngo-1998, apho wadlala khona njengeTruman Burbank - indoda eyonwabileyo ingazi ukuba ubomi bayo bonke bubuxoki obenzelwe umboniso kamabonwakude obukelwe lihlabathi. . Xa izinto ezingaqhelekanga ziqala ukwenzeka kwindawo ahlala kuyo, kubangela ukunxanelwa i-adventure enokuba sisitshixo sokuqhekeza inkohliso awayevaleleke kuyo.
Ngelixa Umboniso weTruman ngokuqinisekileyo unamaxesha ahlekisayo, ngakumbi ekwabelwana ngawo phakathi kukaCarrey kunye nenkosikazi yakhe ebandayo eskrinini edlalwa nguLaura Linney weOzark, ngamaxesha eemvakalelo anokuhlala nawe ixesha elide. UTruman uba ngumntu owoyikekayo njengoko ubomi bakhe buqala ukusombuluka kwaye ukuphela kwefilimu, uyakuba semaphethelweni esihlalo sakho ngethemba lokuba angazikhulula kube kanye.
Ukurhola ngaphezulu kwe- $ 250 yezigidi kwibhokisi yeofisi yehlabathi, iTruman Show yayiyimpumelelo enkulu kwaye yaqhubeka nokufumana amanqaku atyunjiweyo kwii-Academy Awards nakwii-BAFTAs. Ifilimu yayiyeyona nto ibithandwayo kwiGlobal Globes, apho bobabini uCarrey kunye no-Ed Harris abaphumeleleyo baphumelela iindebe ngokudlala kwabo, ngelixa umboniso bhanyabhanya uphinde waxhwitha ibhaso lokufumana amanqaku aphezulu kunye nesandi somoya. -UDavid Craig Bukela umboniso weTruman kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Le American indie sci-fi thriller ebhalwe yayalelwa nguJustin Benson yaqala ngo-2019 eToronto International Film Festival kwaye yakhutshwa ngo-Okthobha ka-2020. Ibalisa ibali lomfazi u-Steve Denube (Anthony Mackie) kunye notata otshatileyo uDennis Dannelly (Jamie Dornan) ngubani Abahlobo abasenyongweni kwaye basebenza kunye njengama-paramedics aseNew Orleans. Banyanga inani lamaxhoba asweleka kwiimeko ezingaqhelekanga ngamabali angenangqondo kwaye onke enxulunyaniswa nesiyobisi esitsha se-Synchronic esifumaneka kwindawo yesehlo. Emva kokunyamalala kwentombi endala kaDannelly uBrianna Dannelly (Ally Loannides), uDenube ufumanisa inyani eyoyikisayo malunga ne-psychedelic ecela umngeni kumbono wakhe wobukho kunye nexesha. Ukuvavanywa kwento ekhaya ubuyela emva ngexesha apho loo mmandla wawungumgxobhozo kwaye uhlaselwa ngumoyisi wobukumkani baseSpain. Ugqiba ukuba ipilisi iyamvumela ukuba atyelele ixesha elidlulileyo kwindawo enye kangangemizuzu esixhenxe kwithebhulethi nganye. Isiseko sobukrelekrele befilimu siyenza ibonakale inomdla kodwa ingenazo imixholo enzulu. Nangona kunjalo, iyenzela abalinganiswa abomeleleyo kunye nokuthandabuza. -U-Owen Tonks Bukela i-Synchronic kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ifilimu evelise ukunqongophala kwee-GIFs ezithandekayo kunye neekowuti, Amantombazana athetha ukuba lixesha lonke eliqhelekileyo lohlobo lomdlalo wolutsha. Ibhalwe yinkwenkwezi yaseMelika uTina Fey (30 Rock), isazisa ngoCady Heron (Lindsay Lohan), intombazana ekwishumi elivisayo efumana amabanga aphakamileyo okokuqala emva kokuchitha umntwana efundiswa ekhaya.
Ukhawuleza afumanise ulawulo olukhohlakeleyo olulawulwa liqela elibizwa ngokuba ziiPlastikhi, zikhokelwa yeyona ntombazana ibalaseleyo kubo bonke: uRegina George (uRachel McAdams). Inzame yokuqala yokungena kunye nokutshabalalisa ezi zihloko zihamba ngokungahambi kakuhle xa uCady efumanisa ukuba wamkela amaqhinga abo amabini njengoko ukuthandwa kwakhe kuphakama. Kwinkqubo, ubeka emngciphekweni wokuphulukana nabantu ababemkhathalele ngokwenene.
Iqela labadlali liphezulu kumdlalo wabo ngokwenza ngamandla okuqhawuka eLohan, McAdams, Lizzy Caplan kunye nomtyunjwa weAward Award uAmanda Seyfried. Okwangoku, iskripthi sikaFey asiyonto imfutshane yokuhlekisa, ngamanye amaxesha ukuphambukela kwi-surrealism eyayiyinxalenye enkulu ye-30 Rock. Ubuyele ekubhaleni umculo weqonga osekwe kwifilimu, eyaqhubeka nokufumana amagama atyunjiweyo ali-12 kwii-Tony's 2018 Awards. -UDavid Craig Bukela amaNqaku aThetha ngamantombazana kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Buyela kwikamva (iNetflix, BA)
Joyina uMarty no-Doc kwi-adventure yobomi bonke kwi-Back to the future kwi-Amazon Prime. Ifilimu kaRobert Zemeckis kunye noBob Gale izisa ixesha lokuhamba nge-slap-bang kwii-80s kwaye yindawo ephambili yelo xesha. Ulutsha olunguMarty (oludlalwe nguMichael J. Fox) lupholile esikolweni kwaye liceba ukuba yimvumi de umhlobo wakhe osisazinzulu u-Doc Brown (uChristopher Lloyd) ambonise umhlaba omtsha, owenziwe nguDeLorean ohamba ixesha.
Ngokwenyani ayikho imovie enomtsalane ngakumbi yokukuvuyela impelaveki. UMarty no-Doc (ngokoqobo) bangumbane kunye kwaye uburharha bumnandi. Uyakube ucula uHuey Lewis kunye neengoma zeendaba imini yonke ngelixa uphupha usuku olunye ungumnikazi weDeLorean yakho. Kukho isizathu sokuba ibe yiklasikhi - ayisoze yaluphala. Ewe isethwe kwii-80s, kodwa i-Back to the future isenokukhutshwa namhlanje kwaye isazothandwa kwaye ibaluleke ngakumbi iya kuthathwa njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yakha yenziwa. - UHelen Daly Buyela kwixa elizayo kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
I-American action Thriller Mile 22, ekhokelwa ngu-Peter Berg kwaye yabhalwa ngu-Lea Carpenter, yakhutshwa ngo-Agasti ka-2018 kwaye yafumana i-66 yezigidi zeedola ($ 48m) kwihlabathi liphela. Lo mmangaliso ubona inkwenkwezi kaMark Wahlberg njengoJames Silva, iarhente ye-CIA kunye nowayesakuba ligqala lomlo waseMelika ojamelene nokushushumbisa amapolisa ayimfihlakalo uLi Noor (Iko Uwais) ngolwazi olubuthathaka, nolusongela ubomi malunga nokuhlaselwa kwabanqolobi eIndonesia. Ikhowudi yeqela elizimeleyo le-Elite Special Activities iqela elibizwa ngokuba yi-Overwatch kufuneka lihambise iNoor isuka kwindlu yozakuzo yaseMelika iye kumhlaba womoya ojongwa kude kubuchwephesha bezobuchwephesha kwezonxibelelwano uJames Bishop (John Malkovich) kunye nomlawuli wakhe wesibini u-Alice Kerr (Lauren Cohan) . Kuya kufuneka babaleke emkhosini, amapolisa kunye neenkokheli zemigulukudu njengoko bethembele kuBhishophu ukuba abancede bahlasele indlu ekhuselekileyo ye-Russian Federal Service eMelika ngeenjongo zokufumana kunye nokutshabalalisa ukuthunyelwa kwe-Cesium ngaphambi kokuba into enokusasazeka ngemitha ingasetyenziswa njengesixhobo . Ifilimu ichazwe njengonqongophalo lokonwaba ekuhleleni nasekulweni izigcawu ezifumana ukugxekwa. Umboniso bhanyabhanya unika umbukeli into encinci ukuba ayithathe okanye ayicingisise emva koko, ayenze ilibaleke. -U-Owen Tonks Bukela i-Mile 22 kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Emva kweefilimu ezintathu zangaphambili kwiLogary Legend's Monsterverse franchise, abalinganiswa ababini beyona mifanekiso bhanyabhanya ekugqibeleni benyuka balwa bodwa kwi-epic blockbuster, Godzilla vs Kong , ekhutshwe kwangoko ngo-2021, ifilimu ehlala ngokuvisisana negama layo.
Ezi titan zimbini zabelana ngescreen kunye noluhlu lwabalinganiswa babantu-abadlalwe ngamagama amakhulu kubandakanya uAlexander Skarsgaard, uRebecca Hall kunye noMillie Bobby Brown- kodwa ngaphandle kwamanani amabali abandakanya ukubekwa kwenkwenkwezi, ekugqibeleni lidabi phakathi kwezi zibini. izidalwa ezi-gargantuan ekulula ukuba sesona siganeko siphambili.
Nokuba oyena mntu uthandekayo u-Godzilla uza kulungela ukwamkela ukuba ifilimu ineziphene, inabalinganiswa abanamacala amabini kunye nokuhamba okungathandabuzekiyo, kodwa kunzima ukuba ungawubonisi umboniso kwinqanaba elithile, njengoko utsala kwi-choreographed efanelekileyo umlo kubo bonke ubuqaqawuli babo bebhombu. -UPatrick Cremona Bukela uGodzilla vs Kong kwiAmazon Prime Video
Imovie yePalm Springs
Ii-romcoms ezimangalisayo ziye zaba yinto enqabileyo ngexesha lokusasaza, kunye neemovie ezimbalwa zala maxesha ezilawula ukubonakala kulwandle olungapheliyo lwe-generic, i-paint-by-numbers-chick-flicks ehlala ikhutshwa ngamaqonga amaninzi esibhalisayo. Ngombulelo, Iipalm Springs -I-sci-fi romcom eneenkwenkwezi uAndy Samberg noCristin Milioti - batyibilika kunyaka ophelileyo ukuze balondoloze usuku, benika uhlobo olufunekayo lwe-adrenaline.
Eyona ichazwe njengoSuku loMhlaba edibana neMitshato emine kunye noMngcwabo, uPalm Springs ulandela uSarah (Milioti), isicakakazi-somfazi ongenamdla sizama nje ukuya emtshatweni kadade wabo waseCalifornia xa ezifumanisa ebambeke kwilokhi yexesha elinomtsalane, ukhathalelo- iindwendwe zomtshato zasimahla iNyles (Samberg) kwaye isibini sinyanzeliswa ukuba siphinde sibuye kwangolo suku luphindaphindwayo. Ukuhamba ngokukhawuleza, okuhlekisayo kunye nokuhlaziyayo kuthathe ixesha lokujonga ixesha, iPalm Springs inemidlalo emangalisayo eMilioti naseSamberg, iqela elixhasayo elenziwe nguJK. I-Simmons, uMeredith Hagner, uCamila Mendes kunye noPeter Gallagher, kwaye ngokumangalisayo ukujija okunokubuyisela ukubonwa okuninzi. -U-Lauren Morris Bukela iPalm Springs kwiAmazon Prime Video
I-Psychological thriller Greta, ekhokelwa nguNeil Jordan, ibalisa ibali le-waitress yaseNew York uFrances McCullen (uChloe Grace Moretz) ohlala nomhlobo wakhe uErica Penn (Maika Monroe). UMcCullen, osentlungwini yokuswelekelwa ngunina kunyaka ophelileyo, ufumana ibhegi yesitrato sikaloliwe ongaphantsi komhlaba nesazisi sikaGreta Hideg (Isabelle Huppert), umhlolokazi onesithukuthezi nonobubele waseFrance athe wabetha ubuhlobo kunye naye. UMcCullen uya echitha ixesha elininzi kunye no-Hideg nangona wayehlala naye uPenn bebeka uphawu lobuhlobo babo ngokungaqhelekanga. Ngelixa wayeseHideg kwisidlo sangokuhlwa, uMcCullen ufumana ikhabethe elizele ziingxowa ezifanayo nale ayifumene kuloliwe enamagama neenombolo zefowuni eziqhotyoshelweyo. Ukuphazanyiswa kukufumana kwakhe, uMcCullen uqhekeza ubuhlobo kodwa uHideg uqala ukubamba uMcCullen ambonayo njengothathe indawo kanina ongasekhoyo. Emva kokufuna umyalelo wokuthintela ngoncedo lukaPenn, uMcCullen uxelelwa ukuba angathatha iinyanga, ufumanisa iwebhu yamanga kubandakanya into yokuba uHideg ungowaseHungary endaweni yesiFrentshi nokuba intombi yakhe yazibulala kwiminyaka eyadlulayo ngenxa yokuziphatha kukanina eyoyikisayo. Ifilimu yanikwa ulwamkelo lokusilela, oluchazwe njengeebhonkers ngumgxeki omnye. Nangona kunjalo, i-cast iyahamba indlela encinci yokwenza into engekhoyo kwimveliso. -U-Owen Tonks Bukela uGreta kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Oopopayi bamva nje abavela kwiDisney, URaya kunye neNamba yokugqibela ithatha inkuthazo evela kumazwe ahlukeneyo kunye neenkcubeko zoMzantsi-mpuma weAsia, kubandakanya iLaos, iVietnam, iCambodia kunye neThailand. Ngokusekwe kwilizwe lamaphupha laseKumandra, ibalisa ibali lentombazana encinci, ebizwa ngokuba nguRaya, onoxanduva lokufumana inamba yokugqibela yobukumkani ngenjongo yokunqanda i-Druun - izilo ezikhulu ezibuyileyo zenze umonakalo emva ukungabikho kweminyaka engama-500.
Xa efumana inamba, nangona kunjalo, uyothuka akufumanisa ukuba kunokuba abe ligorha elinesibindi nelingoyikiyo ebecinga ukuba, ungudade omncinci onamawele weedragons ezinesibindi. Oku kulandelayo kukuzonwabisa okuhle kunye nazo zonke iindlela zokuzonwabisa zabalinganiswa, ezivakaliswe yiyo yonke inkwenkwezi ebandakanya uKelly Marie Tran, Awkwafina, uSandra Oh, uBenedict Wong noGemma Chan.
Kufanelekile ukubukela oopopayi abahle bodwa, kwaye ukulandelelana kwamanyathelo rhoqo zezona zilungileyo oza kuzifumana kwimovie yoopopayi, emva kokuba ubuyiselwe ebomini ngoncedo lweengcali zobugcisa bemfazwe. -UPatrick Cremona Bukela iRaya kunye neNamba yokugqibela kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ekhokelwa nguRic Roman Waugh, i-Angel iye yawa ilandela ibali le-arhente yeNkonzo yezeMfihlo uMike Banning (uGerard Butler) njengoko wayegcinwe elugcinweni ngabasemagunyeni kulandela ukuzama ukubulala kukaMongameli uAllan Trumbull (Morgan Freeman). Ukuvalwa komsebenzi kwakubandakanyekile kuhlaselo lobungqina obunikwe iarhente ekhethekileyo uHelen Thompson (Jada Pinkett Smith) kubandakanya inwele kunye neDNA kuloo ndawo. Ukuthintela ukuphuncuka ekuvalelweni kwaye kufuneka ushiye i-FBI kunye neNkonzo yaMfihlo kwiinjongo zokufumana isoyikiso sokwenene kumongameli. Uqala kwimishini yokucoceka igama lakhe nokukhusela ilizwe kwingozi esondeleyo, ebangela ukuba uBanning abize abantu abangathandani naye. Ingelosi iye yawa yinto trology yesenzo esilibalekayo kodwa esi sixa sokugqibela simnandi ngakumbi kunesibini esidlulileyo. -U-Owen Tonks Bukela iNgelosi iwele kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
URiz Ahmed uchithe iinyanga ezisibhozo zobomi bakhe elungiselela indima ekhokelayo kule filimu, efunda ukudlala amagubu nokunxibelelana ngolwimi lwezandla. Kwaye kuyabonisa. U-Ahmed udlala i-punk metal drummer, uRuben uhlala ephupha - uphume endleleni kunye nentombi yakhe, uLou (Olivia Cooke) edlala iigigs kwaye esondla i-adrenaline. Banomculo kunye nomnye nomnye, akukho enye into efunekayo. Kodwa uhlaselwe liphupha elibi xa evuka kwaye efumanisa ukuba ukuva kwakhe kuncipha ngokukhawuleza ngenxa yegubu lendlebe eligqabhukileyo. Exhalabile ingxaki iya kumphosa kwiindlela zakhe zakudala zokusebenzisa gwenxa iziyobisi, uLou umthumela kwikomkhulu elinabantu abazizithulu, apho kufuneka afunde ukwamkela ubomi bakhe obutsha. Umbuzo ngulo, ngaba angaze athembele kubomi bakhe obutsha, okanye ngaba uya kuhlala epineka ngendlela izinto ezazingayo? Lo mboniso bhanyabhanya ukhangela umphefumlo ngokungaqhelekanga wawuneminyaka eli-13 usenziwa, wazuza amagama abathandathu abonyulwa u-Oscar kwaye ngokucacileyo wawungumsebenzi wothando kuye wonke umntu obandakanyekayo. Ukuba uvavanyo lwemovie elungileyo kukuba usacinga ngayo kwiveki kamva, Isandi sensimbi sidlula ngemibala ebalekayo. Kwaye ukusebenza okuphakathi kuka-Ahmed kukuzibophelela nje. -Emma Bullimore Bukela isandi sentsimbi kwiAmazon Prime Video
UArthur Bishop (uJason Statham) ngumbulali obalaseleyo owazibulala kwaye waphila ubomi obutsha eRio de Janeiro, eBrazil emva kokusebenza njengendoda eyomeleleyo. Nangona kunjalo, nangona efihle phantsi kwegama uSantos, umhlala phantsi wakhe usesichengeni njengoko esiza ngekhuriya uRenee Tran (Rhatha Phongam) owaziyo ukuba ungubani kanye kanye. Umqeshi kaTran ngu-Arch-nemesis ka-Bhishophu u-Riah Crain (uSam Hazeldine) ofuna ukuba u-Bishop abulale abantu abathathu, ebeka ukufa kwabo njengeengozi, kodwa yena ubalekela eThailand kwaye uhlala kwindlu yaselwandle yomhlobo wakhe u-Mei (Michelle Yeoh) njengoko esoyika obakhe ubomi ukuba akawamkeli lo msebenzi. UBhishophu ufumanisa ukuba akanandlela yimbi ngaphandle kokuhamba iglobhu kwaye enze iihits. Umboniso bhanyabhanya ubona inkwenkwezi yeStatham kwiindawo ezininzi ze-octane njengoko uBhishophu ebandakanyeka kwimilo, ukuxhwila, ukuthimba kunye nokubulala. Ekhokelwa ngu-Dennis Gansel, le ntshukumo ye-American-French isenzo asizange samkelwe kakuhle. Ngelixa uStatham ebeka intsebenzo efanelekileyo, kukude kwifilimu yeBond okanye iMishini: ukubetha okungenakwenzeka. -U-Owen Tonks Bukela ukuvela kwakhona kweMechanic kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
UMargot Robbie kwiintaka zexhoba (WB)
Ngentsebenzo kaMargot Robbie ebukekayo enganxitywanga njengoko uHarley Quinn engomnye weendlela ezilungileyo eziza kuphuma kwiQela lokuzibulala lika-2016, akuzange kumangalise xa uWarner Bros enika uFleabag waseDC owayengumbulali wefilimu yakhe Iintaka zexhoba (kunye nokuKhululwa okungummangaliso kuka-Harley Quinn). Cwangcisa iminyaka emine emva kokuba u-Cara Delevingne's Enchantress oyisiwe, i-blockbuster ka-Cathy Yan ilandela u-Harley Quinn njengoko eqhubeka nokuqhekeka kwi-Joker engabonakaliyo nangaphandle kokukhuselwa kwakhe, ezifumana ekwinqwelwana le-Gotham mobster Roman Sionis (Ewan McGregor) . Emva kokubambisana nomcuphi onxilisayo uRenee Montoya (uRosie Perez), umlindi onamandla amakhulu we-Black Canary (uJurnee Smollett-Bell), umbulali oyinkedama uHuntress (uMary Elizabeth Winstead) kunye nokukhetha umntwana uCassandra Cain (uElla Jay Basco), uHarley Quinn ulwa umva nxamnye nabaphuli-mthetho abenze iintshaba zakhe kwaye ufunda ukubeka ithemba lakhe kwabanye abantu.
Ifaka i-stellar cast, ukusukela phezulu, ukuqhushumba okukhulu kunye nokulandelelana kokulwa, iiNyoni zeNtshontsho yiyo yonke into oyifunayo kwifilimu yamaqhawe kunye nokunye, kunye nomlobi uChristina Hodson ebeka ulonwabo, ulwimi-esitheni lujikeleza kuhlobo olo ngokugqibeleleyo Ubeka ephepheni i-antihero engalindelekanga eyi-Harley Quinn. -U-Lauren Morris Bukela iintaka zamaxhoba kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
Umlawuli weSuperstar uGuy Ritchie ubuyele ezingcanjini zakhe kule gangster flick, esebenza njengendlalifa eyomeleleyo kwizinto zokomoya ezinje ngeSnatch kunye neLock, iStock kunye neMibhobho emibini yokuTshaya. Ibali lijikeleze uMickey Pearson (uMateyu McConaughey), inkosi yeziyobisi ijonge ukuphuma kwishishini ngelixa igcina indlela yayo yokuphila ethandabuzekayo.
Lowo ayizukuba ngumsebenzi olula kunye neentshaba ezijamele kwikona nganye, ukusuka kwimigulukudu ephikisanayo ukuya kubacuphi babucala abanobuqhophololo, bonke bejonge ukuzikrwebhela isilayi sobukhosi bukaMickey. Ngelixa izibonda ziphezulu kuyo yonke indawo, ifilimu igcina ithoni yokukhanya ngokuthe gabalala ngesikripthi esinobuqili kunye nesiphithiphithi esinobuninzi babalinganiswa abakhulu kunabomi.
Inkwenkwezi yeenkwenkwezi zonke ibandakanya ukubonakaliswa kokuma kukaCharlie Hunnam, uHenry Golding, uColin Farrell kunye noHugh Grant, zonke ezi zimnandi ngaphezulu kwaye zihambelana ngokugqibeleleyo nefilimu zany ithoni. IiGentlemen zaba ngumntu oleleyo ebutsheni bowe-2020, efumana ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidi kwi-ofisi yebhokisi ngaphambi nje kokuba ii-cinema zivalwe (kwaye zikhusele uthotho lwe-TV kwinkqubo). -UDavid Craig Bukela amaGentlemen kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Umdlalo weqonga oyimfihlakalo waseMelika ka-2015 okhokelwe nguRupert Goold usekwe kwimemori yegama elifanayo ngentatheli uMichael Finkel. Ifilimu ilandela ubomi bukaFinkel (iJona Hill) emva kokuphulukana nomsebenzi kulandela inqaku leNew York Times Magazine elaphula imigaqo yokunika ingxelo. UFinkel ufumana umnxeba ovela kwintatheli e-Oregonian malunga nendoda ebizwa ngokuba nguChristian Longo (James Franco) owayekoluhlu olufunwa kakhulu yi-FBI obesebenzisa isazisi sikaFinkel. Enomdla, uFinkel utyelela uLongo entolongweni. U-Longo uxelele uFinkel ukuba ulandele ikhondo lakhe kwaye uyayithanda into ayibhalileyo kwaye uthembisa ukunika uFinkel elakhe icala malunga nolwaphulo-mthetho alubuleleyo ukuze anikezele ngezifundo zokubhala ukuba nje uthembisa angaxeleli mntu ngento ayithethayo. ULongo uliphika ityala lokubulala amabini kodwa unetyala lokubulala inkosikazi yakhe kunye nenye yeentombi zakhe. Wothukile, uFinkel ujongana noLongo ngaphambi kokuba eze kumcuphi uGreg Ganley (Robert John Burke) owabamba uLongo wamlumkisa ukuba uLongo yindoda enobungozi nekhohlisayo. U-Longo ufunyenwe enetyala wagwetyelwa ukufa kwaye uqhwanyaza u-Finkel njengoko ekhutshwa e-dock emva koko uFinkel efumanisa ukuba uLongo umtyise iwebhu yobuxoki. UFinkel uqhubeka nokubhala incwadi malunga neencoko zabo, etyhila ibali lokwenyani. Ibali lokwenyani lafumana ulwalamano oluxubekileyo noHill noFranco benconywa ngomsebenzi wabo. Nangona kunjalo, ezinye zezibakala zobomi bokwenyani zilahlekile kumyalezo oxubeneyo wefilimu. -U-Owen Tonks Bukela iNyaniso yeBali kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ifilimu engadingi kwaziswa, kodwa siza kuyinika yona. Abagibeli: Umdlalo wokugqibela yayisisiphelo esothusayo seshumi leminyaka lokubalisa amabali avela kwiMarvel Studios, edibanisa amaqhawe endalo yonke ye-cinema ukuze alwe idabi elixabisekileyo nxamnye neTitan Thanos kunye neebhononi zakhe. Akufuneki ukuthetha, mhlawumbi kuyonwaba kakhulu emva kokubukela ezinye iimovie ezimangalisayo ngokulandelelana.
Nangona isolula ixesha elide lokubaleka, I-Endgame iyakwazi ukuhlala inomdla kwaye inika umdla ngokwahlulahlula ibali lazo libe ziziqwengana ezintathu-umdlalo weqonga ojamelene nemva kweMfazwe engapheliyo, ixesha lokuhamba elingalindelekanga, kwaye okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho. , Isiphelo esipakishwe amanyathelo esonga le saga ye-sci-fi kwisaphetha esicocekileyo esincinci.
Le blockbuster eneenkwenkwezi URobert Downey Jr, uChris Evans kunye noScarlett Johansson balawula i-ofisi yebhokisi yehlabathi, bafumana i-2.8 yezigidigidi zeedola kwaye babhukuqa okwethutyana i-Avatar kaJames Cameron njengeyona bhanya-bhanya iphezulu yexesha lonke. I-Endgame kunye nezinye iimovie zeMCU zisasaza simahla kwiDisney Plus, kodwa kungenjalo ungayonwabela ngomrhumo ngeAmazon Prime. -UDavid Craig Bukela abaphindezeli: Igama lokugqibela kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
Ifilimu yokuqala engeyoyesiNgesi yokuphumelela owona Mfanekiso ubalaseleyo kwii-Oscars, kwihlaya elimnyama laseKorea Isidudu Uphinde wazibhala iincwadi ezirekhodiweyo xa zazikhutshwa ngo-2019. Kodwa ngaphaya kobuqaqawuli bamabhaso (ibhanyabhanya yaphela iphumelela amabhaso amane eAkhademi, iiBAFTAs ezimbini kunye neGolden Globe), lo ngumlindo wokuzonwabisa. Uya kukhawuleza uzinze kwimibhalo engezantsi njengoko ufunda malunga nosapho olusokolayo lwabazali abane - ababini kunye nabantwana abangamashumi amabini ananye - abahlala kwiimeko ezixineneyo esixekweni. Omnye nomnye, baxakeke yimisebenzi ehlawulwa kakuhle kunye nosapho lweePaki ezingalindelekanga, bezenza ngathi bafanelekile njengomhlohli wamaNgesi, ingcali yezobugcisa, umqhubi kunye nomgcini wendlu. Konke akunabungozi ngokwaneleyo ukuqala, kwaye bazinza kwindlela yabo entsha yobomi, batsala uboya ngamehlo abaqeshi babo. Kodwa i-caper kungekudala ijika ibe yintsomi emnyama, engazinzisiyo, njengoko ukujija okungalindelekanga kunyanzela usapho olucekisayo ukuba luthathe amanyathelo aqatha- intliziyo yakho iya kuba semlonyeni wakho ngaphambi kokuba kugqitywe iikhredithi zokugqibela. Kufanelekile ukubukelwa ngaphambi kokuba i-HBO ethethe kakhulu malunga ne-TV spin-off uthotho lwenziwe, oluya kuthi lube yinkwenkwezi uMark Ruffalo kunye noTilda Swinton. -Emma Bullimore Bukela iParasite kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Inkwenkwezi izelwe (2018) UBradley Cooper, uLady Gaga
Akuzange kubekho ntengiso ibalaseleyo yefilimu ngaphandle kukaLady Gaga kunye noBradley Cooper benyuka eqongeni kwii-Oscars ukuze benze i-duet eshushu kangangokuba wonke umntu waqiniseka ukuba bayinto. Ngokukrakra, i-YouTube ukuba uyiphosile okokuqala ngqa. Esi sibini sabethwa yiprojekthi kwaye kwabonakala ngathi banomdla omnye komnye. I-chemistry sizzles kwi-movie, njengoko uGaga edlala inkwenkwezi ezayo kunye nothando kunye nomculi ozinzile. Umsebenzi wakhe usaqala kwaye eyakhe iyawohloka, ke ukuthandana kwabo okuyintloko kuxhonywe likratshi lobuchwephesha, amabhongo kunye nenzondo, ezinokubonisa i-cocktail enetyhefu. Olu luphuculo lwamva nje lomdlalo wefilimu osele uvele uJudy Garland noBarbra Streisand kwindima ephambili, ke ucinga ukuba ngekhe kubekho ziphuculo zishiyekileyo ukongeza. Kodwa iskripthi esiphuculiweyo, intsebenzo entle kunye nesandi esiphumeleleyo se-BAFTA senza ukuba le movie ibaluleke kakhulu ukuba uyiqwalasele. Ayizinzanga eyindoda ekhokelayo, ephethe i-Lady Gaga i-Oscar, kwaye abanye bathi kufanelekile ukuba aphumelele nakwintsimbi yokubambela. -Emma Bullimore Bukela iNkwenkwezi izelwe kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
Isenokungabi nalo uphononongo oluphezulu, kodwa kukho into ekugqibeleni emnandi kwaye iyathandeka ngokungaqhelekanga malunga noDavid Ayer IQela lokuzibulala . Iqela leziphene zolwaphulo-mthetho zinikwe uxanduva lokusindisa umhlaba emva kokubhubha kukaSuperman. Ukuba bayaphumelela, izigwebo zabo ziya kufutshane, kodwa ukuba akunjalo, baya kufa. Umsebenzi wabo kukoyisa i-Enchantress (edlalwa nguCara Delevingne), kodwa ayizukuba lula, kuba uligqwirha elinamandla anamandla angaphaya kokukholelwa. Ngokwenkcubeko, iQela lokuzibulala labonakala likhulu njengoko lasazisa kuMargot Robbie kaHarley Quinn onesimilo sakhe esithandekayo esasungula isinxibo samawaka e-Halloween.
Ifilimu isenokungabi nelona qhinga linamandla kwaye ukugxekwa kwathiwa kwenziwa ngexesha elincinci elifutshane likaJared Leto u-Joker owayebonakala kakhulu kwifilimu, kodwa i-cast ngumbane kwaye isandi ngokuqinisekileyo siyathandeka. Ikwayifilimu yokuqala kwiDCEU ukuba iphumelele imbasa yeAkhademi (eyona Makeup kunye neHirstyling). Ngaphezu koko, kufanelekile ukubamba iqela lokuzibulala ngaphambi kokuba ubukele u-Harley othandekayo ojikelezayo kwiintaka zexhoba kunye nokuzayo okulandelayo Iqela lokuzibulala, ngenxa kamva kulo nyaka. - UHelen Daly Bukela iqela lokuzibulala kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
URosamund Pike kuNdikhathalele uLote
Ukuba ukonwabele ukujika kwegazi likaRosamund Pike kwiGone Girl, uya kuyithanda intsebenzo yakhe kule thriller ekhawulezayo, eyafumana umdlali weBritane iGolden Globe ekuqaleni kwalo nyaka. UPike udlala ngokungenanceba uMarla Grayson, umfazi otyunjwe ziinkundla ukuba asebenze njengomgcini osemthethweni wabantu abadala abafuna uncedo lokuzinakekela. Ingxaki kukuba, abantu abanyulileyo balungile-ekuphela kwento ekufuneka bayoyike nguGrayson, oba imali yabo, ebafaka ekhayeni kwaye ebaxhaphaze ngeenjongo zakhe. Kodwa ngaminazana ithile uchola ixhegwazana elingalunganga. Unyana wakhe ngumgulukudu (odlalwa yinkwenkwezi yoMdlalo weZihlalo zobukhosi uPeter Dinklage) kwaye uyakwenza konke okufunekayo ukuqinisekisa ukuba umama wakhe ulungile. Cue umdlalo wekati kunye nempuku, apho bobabini abadlali baya kuyeka khona ukuze bafumane into abayifunayo. Akunakwenzeka ukuba uqikelele kwaye ujongane nomcimbi wokuphazamisa umxholo, Ndiyakhathala kakhulu Yifilimu eya kwenza intliziyo yakho impompoze kwaye ikugcine uqikelela kude kube sekupheleni. Ukuhlaziya kwasekuqaleni kwaye kwaziswa ebomini yimidlalo eqaqambileyo, yinyani yokwenyani onokuthi uyongeze kuluhlu lwakho 'lokubukela' kwangoko. -Emma Bullimore Bukela ndiKhathalela uLot kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
Ibali likaVictor Hugo elizukileyo liziswa ebomini kwakhona kulungelelwaniso lomculo lukaTom Hooper. Ngomdlalo weenkwenkwezi owenziwe nguHugh Jackman, uRussell Crowe, uAnne Hathaway, uAmanda Seyfried, uEddie Redmayne kunye nabanye abaninzi, le filimu ihonjiswe kakhulu ayinakuphikiswa. UHathaway uthathe phantse onke amabhaso ngenxa yokuvezwa kwakhe okunamandla kunye namandla eFantine kwaye kuyacaca ukuba kutheni enze njalo.
Uzakufuna izicubu (okanye ezininzi) usondele kule vidiyo yeemvakalelo kunye ne-melodramatic. Ngomculo ovusayo, amaxesha okuphulukana nentliziyo yokwenyani kunye nemidlalo ebalaseleyo, iLes Miserables yenye ongasokuze ufune ukuyiphosa- kwaye ukuba uyinto enjengathi, uya kuba nesandi sokuphinda-phinda kwiintsuku emva koko. - UHelen Daly Bukela ii-Les Miserables kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UReese Witherspoon kwi-Blonde esemthethweni (Getty, FT)
U-Elle Wood uyangqina ukuba umbala weenwele awukuchazi kwi-smash hit ka-2001, ngokusemthethweni i-Blonde. UReese Witherspoon uthatha indima ekhokelayo njengegqwetha le-wannabe elinxibe iimpahla ezibukhali njengobukrelekrele bakhe. Ngalo lonke ixesha lokuhlekisa, u-Elle kufuneka oyise iingcinga ezibekwa ecaleni ezinxitywa kubafazi abaneenwele ezimhlophe kwaye angqine ukuba ulungile ngokwaneleyo ukuba abe kwiHarvard Law School ngalo lonke elixesha ehambahamba ngezithende zakhe ezipinki.
Olu hlazo lukhulu kakhulu kunamaqhula alo (ikakhulu avela kumnandi uJennifer Coolidge). Ngokusemthethweni i-Blonde iphefumlele ngokwenyani ibutho lamagqwetha angabafazi ukuba aye kwisikolo somthetho afumane izidanga zabo. Ngapha koko, kukho ifilimu yesithathu endleleni ngoMeyi 2022 ngoko alikho ixesha elingcono lokungena kunye no-Elle. Bamba ipeni yakho epinki epinki kwaye uthathe amanqaku! -UHelen Daly Bukela Ngokomthetho iBlonde kwiAmazon Prime Video
Ingcuka yesitalato iWall
UMartin Scorsese uzisa imarike yesitokhwe kwiscreen esikhulu kwiWolf yaseWall Street ngempumelelo enkulu. Kwisithuba semizuzu eyi-180 ebukhali, silandela iJordani Belfort (edlalwa nguLeonardo DiCaprio) njengokuba enyuka esihlalweni eWall Street, ngokukhawuleza ephumelela - kodwa ekhohlakele - umthengisi wempahla. I-DiCaprio ngokungazenzisiyo ibonisa ubomi obuntsonkothileyo baseBelfort, buxhokonxwa sisini, iziyobisi kunye nenkohliso-kwaye watyunjelwa u-Oscar ngokusebenza kwakhe.
Ifilimu ngokwayo iyangqinelana neAmerican Psycho kunye neGreatby Gatsby (hayi kuba ikwabelana ngokukhokelayo) njengoko sibona ukubonakaliswa kokubi kobomi baseMelika kwindoda esisityebi engasoloko iyinto ebonakalayo ekubonakala kwayo okokuqala. UMargot Robbie unikezela ukusebenza ngokuma njengeqabane likaBelfort uNahomi, ngelixa uJona Hill emangalisa ngendima eyodwa kuye. Uya kufuna ukugxila ngeli xesha, njengoko iyelenqe lilukhuni kwaye ngamanye amaxesha incoko incinci. Kodwa uya kuvuzwa ngebali elipheleleyo eliphuma komnye wababalisi bamabali ababalaseleyo baseHollywood owakhe wanabo. - UHelen Daly Bukela iWolf yaseWall Street kwiAmazon Prime Video
UJohn Krasinski kwindawo ethe cwaka
UJohn Krasinski kunye neqela likaEmily Blunt kwelinye lawona mabali anomdla kakhulu kwiminyaka yakutshanje. Indawo ezolileyo isebenza kwisiseko esilula: ukuba wenza ingxolo, uya kuzingelwa zizilo ezinendlebe ezibi kakhulu. Kuyo yonke imizuzu engama-90 kakhulu, awusoze uve ilizwi elivela kubadlali njengoko behlala kwifama yefama bethule. Akufanele isebenze, kodwa umphumo wokugqibela unemvakalelo engathandekiyo kwaye ezinye zoyikisayo ziyinyani.
Iifilimu ezothusayo zihlala zingahambi kakuhle ngexesha lokunikezelwa kwamabhaso, kodwa iNdawo yokuThula ngokuqinisekileyo yenzekile, ibambe ngaphezulu kwamagama angama-30. Imveliso iyamangalisa ngokupheleleyo, njengoko uKrasinski (owalathisa naye) enceda ukudala umhlaba ojikeleze umhlaba kunye nomtsalane, obonisa ukuba kungakho ukukhanya nakwezona zingenathemba kakhulu kwindawo enefama entle. Isahluko sokugqibela sefilimu siyakushiya uphefumla kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ufuna iimpendulo - ngethamsanqa basendleleni Indawo ethuleyo Icandelo II . - UHelen Daly Bukela indawo ethe cwaka kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ngokuqinisekileyo elinye lawona mabali athandanayo othando ngalo lonke ixesha, iNqaku leNcwadi yifilimu wonke umntu ekufuneka eyibonile. Ngokusekwe kwinoveli enegama elifanayo nguNicholas Sparks, uRyan Gosling kunye noRachel McAdams badlala abathandi uNowa noAllie ekulindeleke ukuba babe kunye, kodwa ikhondo lothando lokwenene aluzange luhambe kakuhle. Nangona ngexesha lokukhutshwa kwefilimu yafumana uphononongo oluxubekileyo, iNcwadana yokubhalela iqhubekile nokufumana iwonga lenkolo, iqhubela uGosling kunye noMcAdams kwiinkwenkwezi esizaziyo namhlanje.
Abadlali abaphambili bayayenza ifilimu. Ngamanye amaxesha ibali liyabetha phezulu kwaye liphantsi, kodwa uMcAdams kunye neGosling bahlala bephethe iskripthi ngobumnandi. Isiphelo ngokungathandabuzekiyo siyakuyophula intliziyo yakho, siyenze yonke ifilimu kufanelekile ukunamathela kuyo - qiniseka nje ukuba ulayishwe ziithishu kuba siqinisekisa ukuba uya kuzifuna. - UHelen Daly Bukela iNcwadana kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
ILiongate yoLonwabo lwaseKhaya e-UK
Ukuba sithe amagama aMdaniso oMdaka, uyakuqhutywa kwangoko ungene kwiholo yomdaniso apho uPatrick Swayze aphumelele nje ukoyisa uJennifer Grey ngentla kwentloko yakhe ngelixa (bendinalo) Ixesha lobomi bam lizalisa igumbi. Kungoko ke amandla efilimu yothando yowe-1987 ethathelwa ingqalelo ngokufanelekileyo njengenye yeefilimu ezinkulu ezakhe zenziwa. IGrey engenatyala kodwa eyoyikisayo uFrances Baby Houseman yeyona nto ikhokelayo, engenako ukunceda kodwa uthandane noJwayny Castle ongaphikiswa nguSwayze. Ukuphosa kulunge ngokugqibeleleyo, kwaye unxibelelwano lwabo alunakuphikwa.
Kukho isizathu sokuba ifilimu iklasikhi. Ibali linemixholo yeRomeo noJuliette kunye nomgca omninzi wokucaphula. Kodwa ngaphezu kwayo yonke loo nto, ingoma ayilibaleki, ibandakanya (bendinayo) Ixesha loBomi bam (eliza kuqhubeka nokuphumelela i-Oscar), Yiba lusana lwam kwaye kunjalo, Amehlo Alambile. Siyamdelela nabani na ukuba angatsaleleki kwaphela kule bhanyabhanya izukileyo eya kuthi ibethe ubhontsi wakho. - UHelen Daly Bukela ukuDanisa okungcolileyo kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UDamien Chazelle ulandele umculo wakhe ongachukumisiyo ophumelele u-Oscar eLa La Land ngesi sithuba se-biopic ngo-2018, ephinda edibana noRyan Gosling kwinkqubo. U-Gosling ujika kwintsebenzo enkulu, engaphantsi komntu njengendoda yokuqala kwinyanga uNeil Armstrong, kwifilimu ethetha kakhulu ngengxwabangxwaba yakhe yangaphakathi njengoko ingomdyarho wendawo ngokwawo.
Umdlalo odumileyo wosapho kumdlalo bhanyabhanya ukwabonelela uClaire Foy ngethuba lokuqaqamba njengomfazi ka-Armstrong osentlungwini, indima eyamzuzela i-BAFTA, ngelixa abanye abaxhasi -kuquka uKyle Chandler, uCorey Stoll noChristopher Abott - ngaba ikwimo entle.
Iziphumo zomsebenzi nawo ubalasele, ngokubonakalayo okuhle kuyo yonke indawo, ngelixa umba wokhuphiswano lwendawo ujongiwe kwinani elifanelekileyo leenkcukacha-uxelela abaphulaphuli into ekufuneka beyazile ngaphandle kokuba yintetho yesayensi. Ukukhankanywa kwakhona komqambi ogqwesileyo womqambi weLa La Land u-Justin Hurwitz, owenza ukusetyenziswa okuqaqambileyo kwe-elektroniki theremin kunye ne-Moog synthesizer kwaye waphumelela iGolden Globe. -UPatrick Cremona Bukela uMntu wokuqala kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UJordani Peele wayesele ezibhengezile njengelizwi elitsha elibalulekileyo lomlawuli kunye ne-Dut Out, kwaye wahambisa esinye isilayidi esincomekayo sentlalontle esothusayo ngale vidiyo ibalaseleyo ye2019.
Iziko lemiboniso bhanya-bhanya kusapho oluthi, ngelixa lizama ukonwabela iholide yokuphumla, ngequbuliso bajongane nesoyikiso esothusayo nesingaqhelekanga: iqela elinxibe isuti ebomvu, enxibe isikere esinee-doppelganger ezibonakala ngathi zinenjongo yokubabulala nangayiphi na indleko. Kuyakhawuleza kudlule ukuba ababodwa - wonke umntu okufuphi naye uyabanjiswa ngala manani, azibhengeza njenge-The Tethered.
Kwidrama elandelayo, kukho ukulandelelana kwamanyathelo okuqaqamba, ukuhla kwenaliti egqibeleleyo kunye namaxesha athile oburharha obumnyama ngokumangalisayo, singasathethi ke ngokujija okumbalwa nokujika endleleni. Imisebenzi intle kakhulu macala onke, kodwa nguLupita Nyong'o oba lo mboniso ngendima ebabazekayo - ukuba wayengonyulwanga njani u-Oscar koku asisokuze sazi. -UPatrick Cremona Sijonge kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Kong: Isiqithi soKhakhayi
Kuzo zonke izavenge kwiLigorari yoLonwabo yeMonsterverse, le yeyona nto imnandi kakhulu - i-Apocalypse Ngoku iphefumlele i-adventure enengoma eqaqambileyo yemfazwe yaseVietnam kunye neminye imiboniso yokufa.
Embindini webali nguSamuel L. Jackson njengoPackard, umphathi-mkhosi wase-US malunga nokuhamba eVietnam, okhuthazwayo ukuba aye kwinjongo enye yokugqibela: uhambo oluyimfihlo oluphezulu oluya kwisiqithi esingaqondakaliyo esihlala inyamakazi eyaziwayo. Ngokwendalo izidalwa zalapha azingabo abamkelekileyo ePackard kunye neqela lakhe, kwaye bajongana nexesha elinzima ngaphambi kokuba bafumane uKong ngokwakhe - kukhokelela kukonwabisa okumnandi, ukuba akunjalo ncam ngemvulophu yokutyhala, amava kubabukeli.
Elona xesha lifanelekileyo lomfanekiso bhanyabhanya liza emva kokungeniswa kukaJohn C. Reilly njengegqala lomkhosi elibonakala ngathi ligeza kwaye lize lathanda uKong kunye nobomi balo kwesi siqithi - libolekisa ifilimu ngentliziyo encinci kune-monster flick yakho. -UPatrick Cremona Bukela i-Kong: Isiqithi soKakayi kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UJames Bond (uDaniel Craig) kwiSpecter
IMetro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., iDanjaq, LLC kunye neColumbia Imizi mveliso
Ngelixa siqhubeka nokulinda ukukhutshwa kwe- Akukho xesha lokufa , ubuncinci sinokuwa emva kwe-24 zangaphambili zeBond adventures, eyona yakutshanje yayiyiSpecter ka-2015. Ukwazisa uChristoph Waltz njengoyena mntu ubalaseleyo kubo bonke abachasi abayi-007 u-Ernst Stavro Blofeld, umboniso bhanyabhanya wabona iarhente ephindwe kabini yomntu wonke esenza umsebenzi obalulekileyo wokuveza inethiwekhi yolwaphulo-mthetho olufihlakeleyo.
Ukuphendula kwifilimu kwakuxutywe ekukhululweni kwayo, kwaye kuyinyani ukuyithetha into yokuba ayikhange ibethe kakhulu ukuphakama komntu owayengaphambi kwayo uSkyfall, ngesiphelo esinomdla esashiya abanye abalandeli beBond bezonwaya iintloko. Nangona kunjalo uSam Mendes ebuyile njengomlawuli, kwakusekho iminyhadala yokunyathela umhlaba, kunye nolandelelwano oluvulekileyo lokulandelwa kweSixeko saseMexico ekuthiwa sisiqalo seMendes 'BAFTA yokuphumelela ifilimu yemfazwe ngo-1917.
Njengamaxesha onke bekukho nabalinganiswa abamibalabala nabo, benobuso obubuyayo njengoRalph Fiennes, uBen Whishaw, kunye noNaomie Harris bejoyine abantu abatsha abafana noLea Seydoux njengoGqirha Madeleine Swann, ugqirha wezengqondo waseFrance kunye nomdla wothando olutsha lukaBond. Alikho ixesha lokufa xa ekugqibeleni lifika kwii-cinema. -UPatrick Cremona Bukela iSpecial kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Mhlawumbi eyona bhanyabhanya inamandla mayela nokubetha kwegubu eyenziweyo, amaziko omdlalo weqonga kaDamien Chazelle kubudlelwane phakathi komntu othanda ukubetha isigubhu somculo wejazz u-Andrew (uMiles Teller obalaseleyo) kunye nomphathi wakhe ophethe gadalala uTerence Fletcher, odlalwe ngeaplomb nguJ. Simmons ekusebenzeni okuphumelele u-Oscar.
UAndrew ngumfundi wamabhongo onyaka wokuqala kumfundi oqanjiweyo weShaffer Conservatory, ozifumana sele ethwelwe ibhendi yesikolo esiphakamileyo, esikhokelwa nguTerence owoyikekayo. UFletcher uhlala ebanga ukuba uzama ukufumana okona kulungileyo ngabafundi bakhe, kodwa iindlela zakhe ezinobundlobongela neziyingozi zinqamleza kwi-psychopathic, kwaye aqhube abafundi bakhe-kubandakanya no-Andrew - kwiindawo eziya zisiba nzima.
Umboniso wobukrelekrele kunye nokuzonwabisa okothusayo ngokuzingca kunye namabhongo obugcisa, ifilimu isebenza ngokugqibeleleyo okokugqibela- inesigcawu sokugqibela esimangazayo esiya kuthi ngokuqinisekileyo siqhubele ababukeli abaninzi kwimincili. -UPatrick Cremona Bukela iWhiplash kwiAmazon Prime Video
Ifoto nguWarner Bros.
Ukuba ubucinga ukuba i-Justice League kaZack Snyder ibumnyama, linda ude ufumane umthwalo weJoker. Ifilimu ephumelele u-Joaquin Phoenix i-Oscar ngo-2020 kwaye yafumana amanye amagama abali-11 asuka kwi-Akhademi, iJoker intle kakhulu kwaye ihlonitshwa njengemidlalo bhanyabhanya ehlekisayo. Ngokukhuthazwa kakhulu nguMqhubi weTeksi kaMartin Scorsese kunye noKumkani weKomidi, uJoker ubeka ngokungathandekiyo kwiClown Prince of Crime yeDC Comics, ecinga ukuba uBemman's nemesis njengehlaya eliphantsi nelinengxaki yempilo yengqondo ebambeke kuluntu olungakhathaliyo.
Nangona iphakamile ngokuphawulekayo njengefilimu enzulu ngokwayo, iJoker nayo isiphakamiso esinomdla kubantu abathanda ama-movie. Ngomntwana omncinci uBruce Wayne, abazali bakhe abatshabalalayo kunye noAlfred umngcamli konke ukwenza ukubonakala, iphantse ibengathi sisandulela sefilimu yaseBatman esingasokuze siyibone. URobert DeNiro, uZazie Beetz kunye noMarc Maron bajikeleza abadlali, kunye nomlawuli uTodd Phillips osebenza kwiscreen sikaScott Silver ukuhambisa imovie yencwadi ehlekisayo ngathi ayikho enye. Ukunyaniseka, ngekhe siphinde siyibone ifana nayo kwakhona. Kufanelekile ukuba ujonge le vidiyo, ukuba awukabikho, ukubona nje ukuthatha okwahlukileyo ngokupheleleyo kwindalo yonke yeDC. -Rob Leane Bukela iJoker kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ngasinye isihlandlo kwi… Hollywood
ULeonardo DiCaprio kunye noBrad Pitt badlala INXAXHEBA KWIXESHA LEHOLLYWOOD.
Ibhalwe yaza yayalelwa nguQuentin Tarantino, Kanye nje… i Hollywood yinto ebamba umdla kwimbali yaseMelika. NgoLeonardo DiCaprio edlala iqhawe lesilivere elibizwa ngokuba nguRick Dalton, kunye noBrad Pitt kwindima yomntu obekekileyo uCliff Booth, umboniso bhanyabhanya unobomi bokwenyani baseHollywood ophuma ezindlebeni zakhe. Kwelinye icala, Kanye nje Ngexesha… IHollywood idlala ngokungathi zihlekisayo jonga emva kwinto eyayifana neHollywood kwiminyaka engama-60. Kodwa kwelinye icala, kukungazinzisi ngandlela ithile kwinto ebesele isahluko esimnyama kakhulu kwimbali yaseTinsletown. Kungenxa yokuba uMargot Robbie udlala uSharon Tate, umdlali weqonga lokwenyani owabulawa kwikhaya lakhe eLos Angeles lihlelo leMason Family ngo-Agasti 1969.
Indlela ifilimu ebonisa ngayo ezi ziganeko yinto eyahlula uluvo ngexesha lokukhululwa ngo-2019, kodwa loo nto ayimisanga umboniso bhanya-bhanya ekufumaneni ukutyunjwa kwe-10 ye-Academy Award kunye nokugoduka nee-Oscars zoYilo oluGqwesileyo lweMveliso kunye neActor Best Supporting (eya ukuya ePitt, ngomnye weyona midlalo yakhe mihle kule minyaka idlulileyo). Njengefilimu ezininzi zeTarantino, kanye emva kwexesha… iHollywood ibaleka ixesha elide, inexesha elinzima lemizuzu eli-161. Kodwa kufanelekile ukubukela, ukupakisha kwiindawo ezixineneyo kunye neempawu ezinomdla ezininzi. -Rob Leane Bukela Kanye Kanye Kwi… Hollywood KwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Ngokusekwe kwibali eliyinyani eliyinyani, uMdlalo kaMolly yifilimu ka-2017 ebona uJessica Chastain kwindlovukazi yeLoker Los Angeles poker Molly Bloom. Owayesakuba ngumtyibilikisi oba yinkokeli yomdlalo weqhekeza ophakamileyo, uMolly ungumlingisi obandakanyekayo nothandekayo oza ngokuchasene nobumnyama beHollywood. Omnye wabalinganiswa abangalibalekiyo nguMdlali ka-Michael Cera Player X, isimilo esidityanisiweyo esingumlinganiso osekwe kwiinkwenkwezi ezininzi zobomi bokwenyani ezazidlala kumdlalo kaMolly. U-Idris Elba, uKevin Costner kunye noChris O'Dowd nabo bayavela, besenza oku kube yinto eneenkwenkwezi.
Ngesikripthi esiqinileyo esiqhelekileyo esivela kuAaron Sorkin (owenza i-directorial debut yakhe emva kwekhamera), uMdlalo kaMolly yifilimu etyikitya ngokuhamba ngesantya kunye neepakethe kuxinzelelo oluninzi. Njengokunikezela ngombono owahlukileyo kubomi bezigidi ze-mega-star, uMdlalo kaMolly ukwabuyela kwindawo yedrama yolwaphulo-mthetho njengoko i-FBI iya isiba nomdla ngakumbi kuMolly. UChastain ufumene iGlobal Globe ngokusebenza kwakhe kwindima yesikhundla, edibanisa charisma kunye neengxabano kakuhle. Isikripthi sikaSorkin sasijongwa kakhulu kwisekethe yamabhaso, sithatha amagama atyunjiweyo kwii-Oscars, kwiGlobal Globes nakwii-BAFTAs. -Rob Leane Bukela uMdlalo kaMolly kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
Iinkwenkwezi zikaMargot Robbie ku-I, Tonya njengo-skater ongumlingisi uTonya Harding
Ukuba awuyazi ibali lokwenyani lomkhenkce waseMelika uTonya Harding, le vidiyo izakushiya ubetheka (nangona ngokuqinisekileyo imovie enengxelo eyomeleleyo, kunokuba ibe yincwadi ebhaliweyo). Ngamaxesha onke oqaqambileyo osisigantsontso uMargot Robbie ukhokela isamente, edlala i-skater esikumsebenzi wakhe ophele kungekudala. Wayenazo zonke iingxaki ezazibekwe kuye ukususela ekuqaleni njengoko wayezama ukufikelela phezulu kwimidlalo yakhe. Ngokukhula okunzima, ubudlelwane obuhlukumezayo kunye nekhethe lokudlulela kwiklasi, siyambona eziphosa kwiskating sakhe ukuze abe yenye yeetalente eziqaqambe eMelika. Unomsebenzi othembisayo weOlimpiki phambi kwakhe, kodwa xa imbangi yakhe iba lixhoba lephulo lentiyo, urhano luwela emnyango weHarding… Ingasetwa erinkini, kodwa eli libali elingaphezulu kokukhwela. Kwakhona u-Alison Janney, ophumelele u-Oscar ngokusebenza kwakhe njengo-Harding's mum LaVona kwaye I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika U-Sebastian Stan njengomyeni ka-Harding, ngumboniso bhanyabhanya oya kukuvuyela ukuthatha ixesha lakho ukubukela, nokuba akukho nto uyaziyo ngalo mfazi kuthethwa ngaye. -Emma Bullimore Bukela mna, Tonya kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
IWarner Bros Imifanekiso / iiComics zeDC
Kuzo zonke iingcinga ezibalaseleyo eziye zaguqulelwa kwimbonakalo yescreen esikhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo, 'umfana onokuthetha ngokuloba' ayisiyiyo eyona nto ibangela umdla ephepheni. Nangona kunjalo, U-Aquaman Umboniso bhanyabhanya ovela kwi-2018 ungcono kakhulu kunokuba ubunelungelo. Ngengcali eyoyikisayo uJames Wan kwisitulo somlawuli, kunye neMidlalo yeTrone inkwenkwezi uJason Momoa kwindima yesikhundla, ifilimu iyazonwabisa ngokuzonwabisa kuyo yonke indawo. Inyaniso mayixelelwe, kufanelekile ukuba yenze splash enkulu kunaleyo yenzayo.
U-Amber Heard, uWillem Dafoe, uPatrick Wilson, uDolph Lundgren kunye noNicole Kidman bapakisha isamente ngetalente eyoyikisayo, kwaye iqela leziphumo ezizodwa ngokucacileyo liye laya kubude obukhulu ukwenza isenzo samanzi esijolise ekujongeni nasekuziva kamnandi. Ibali linomdla, kwaye abenzi beefilimu kufuneka basebenze malunga nokuba uMomoa wayesele ebonakele kabini kwindima yakhe ye-Aquaman enkosi kuBatman v Superman: Dawn of Justice and Justice League. Oku kuthetha ukuba ufumana isuntswana lesenzo sebali, kodwa kunye nokunye okuninzi ngaphandle, kunye nefilimu ethintela imingxunya yokubanjiswa kakhulu kwimbali yangasemva. Endaweni yoko, ifilimu iyazivumela ukuba ihambe enkulu kwaye ibe sisidenge, ifikelele esiphelweni kwidabi elinamanzi apho i-octopus enkulu idlala igubu. Yintoni enye onokuyifuna? -Rob Leane Bukela i-Aquaman kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UDaniel Craig njengoBenoit Blanc eKinves Out (Lionsgate)
Kushushu kwizithende zefilimu yakhe eyahlula i-Star Wars, iJedi yokuGqibela, umbhali-mlawuli uRian Johnson unikezela ngokuthumela ngokungakhathali Iimela ngaphandle . Ukujonga iindibano ze-whodunnit yakho yesiqhelo, iiKives Out zibona umphandi kaDaniel Craig uBenoit Blanc ebekwa ilambu phantse kuzo zonke iindlela njengoko ezama ukuqhekeza ityala lokubulala. Ukujikelezwa kwakhe ngumdlali weetalente, kubandakanya uChris Evans, uJamie Lee Curtis, uAna de Armas, uMichael Shannon, uToni Collette, uLakeith Stanfield, uKatherine Langford, uChristopher Plummer nabanye abaninzi.
Bonke abo badlali banetalente bayakhazimla ngenxa yombhalo ophumeleleyo kaJohnson, ofumene ukutyunjwa kweBest Original yoBoniso lweeMidlalo kwii-Oscars kwakuloo nyaka. Ibali lijija kwaye lijike likukhathaze rhoqo. Ifilimu yayiyimpumelelo kwibhokisi yeofisi, efumana ngaphezulu kwe- $ 300 yezigidi kuhlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 40 yezigidi- ubungqina, ukuba siyabufuna, ukuba iifilimu akufuneki ukuba yinxalenye yelungelo elikhulu lokungena kwaye ufumane abaphulaphuli.
Ngokunyaniseka, nangona kunjalo, eyona nto intle malunga neeKhiphu lilungelo lokubona abadlali ngasemva kukaJames Bond kunye noCaptain Melika bekhulula iindima zokuhlekisa. Amalandela amaninzi abonakala esendleleni, ngeNetflix ehlawula imali enkulu ngamalungelo abo, nto leyo ebangela ukubhiyozela! Ke ukuba awukabukelanga oqobo, ulinde ntoni? -Rob Leane Bukela iimela ngaphandle kweAmazon Prime Video
Umfazi omangalisayo ngo-1984
UGal Gadot kuMfazi oMangalisayo ngo-1984 (iWarner Bros)
Ukuqukumbela unyaka onzima we-cinema, Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo I-1984 ayinakuba nexesha elingcono. Isityebi, inemibalabala, inomdla kwaye ipakishwe yiminqweno emininzi kunye nemidlalo emikhulu, sisiqwengana sokuzonwabisa esinamandla, kunye nomlandeli ongaphezulu kokufanelekileyo kwi-smash-hit 2017 yoqobo.
UGal Gadot uyamangalisa njengakuqala kwindima ekhokelayo, imiboniso yesenzo iyonwabisa kwaye ayiqhelekanga kwaye ifilimu inikwe isikhohlakali esikhulu kuMaxwell Lord kaPedro Pascal, obaleka ngokungaphaya. Ngeliphandle, awusoze ufune umguvela ophumeleleyo kumacebo akhe amabi ngakumbi.
Akuyona ifilimu efanelekileyo, kunjalo. Yinde kancinci, kwaye ihlala ithatha amanyathelo amakhulu (ngendlela enye) enesiphumo sokushiya amanqaku amabali angaqhelekanga engachazwanga okanye angaphucukanga. Ngaphezulu, i-subplot engaqhelekanga enomdla wothando lukaDiana uSteve (Chris Pine) unokuphakamisa amashiya ambalwa.
Okwangoku, xa umboniso bhanyabhanya lo umnandi kunzima ukukhalaza kakhulu malunga nale micimbi ngaphandle kokuvakala njengeidiliya ezimuncu. Umfazi oMangalisayo ka-1984 wonwabile, uyakhazimla kwaye unethemba-le capper egqibeleleyo ukuya kunyaka apho amathemba okubukela imiboniso bhanya-bhanya eve nantoni na ngaphandle. - UHuw Fullerton Bukela uMfazi oMangalisayo ngo-1984 kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon
UElizabeth Moss kwiNdalo engabonakaliyo (kwiLizwe jikelele)
Kunzima ukwazi ukuba yintoni eyoyikisayo- le nto intle yengqondo evela ku-maestro oyikisayo uLeigh Whannell, okanye ngorhatya emva kokuba uyibukele xa yonke into oyenzayo, ucango oluguquguqukayo okanye itephu yokumpompoza ekulumkisile ngokubonakalayo. Ngokusekwe kwi-movie yakudala ye-Universal enegama elifanayo, le mveliso inika umxholo ukuba ube lixesha elifanelekileyo ngokugxila ku-Elisabeth Moss 'Cecilia, umfazi oqala ukukholelwa ukuba uyangcungcuthekiswa ngumntu wakhe wakudala (u-Oliver Jackson-Cohen) othe ngandlel' ithile wakwazi ukungabonakali kunye nobuxoki ukufa kwakhe.
Ifezekisiwe ikakhulu ngokusetyenziswa kweempembelelo ezibonakalayo kunye ne-cast encinci, Indoda engabonakaliyo yinto ethandabuzekayo, ebhanyabhanya ekwaziyo ukubalisa ibali elichaphazelekayo neloyikisayo kwinqanaba lalo elincinci. Unyawo oluncinci ephepheni, okanye ukuphefumla emoyeni obandayo luyoyikeka njengekhulu leZombi ezimemezayo. Ngapha koko, ukusuka kwindawo yayo yokuqala - ethi ibone uCecilia ezama ukubaleka indlu yesoka lakhe ebusuku) uya kuba semaphethelweni esihlalo, ulungele neetoti zakho zokupeyinta ukuphosa nakweyiphi na irhamncwa. Okwangoku, akukho nto ibetha indawo yokutyela. Ngaba imela elula yesiteki yakha yajongeka isoyikisa kwiscreen? UBrrr. - UHuw Fullerton Bukela iNdoda engabonakaliyo kwiVidiyo eNkulumbuso yeAmazon
Ngaba uyayithanda ingcebiso yomboniso weTV? Khangela isikhokelo sethu kwi-Amazon Prime series, okanye u tyelele Isikhokelo sethu seTV ukuze ubone oko kwenzekayo namhlanje ebusuku.
Ngaba i-intanethi encinci iyayeka ukusasaza? Bhrawuza ezona zixhobo zibanzi zebhendi zokukhawulezisa izinto.
sonic uyilo olutsha lwehedgehog
ngubani ophumelele i-britains wafumana italente ngo-2016
richard e isibonelelo iimfazwe star
umhla wokumiliselwa kwe-galaxy 4